Royal Ni Ni Mini Condo
Royal Ni Ni Mini Condo ကို အမှတ် (၅၄၃/ က+ခ)၊ ဘုံကျောင်းလမ်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် ၀ရိန်မာမြင့် ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားသည့် (၂) ခန်းတွဲ (၈) ထပ်ခွဲ အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ (ပေ ၅၀×ပေ ၈၀) ကျယ်ဝန်းသည့် ဂရံမြေပေါ် တွင် တည်ဆောက်ထားသည့်...
အလင်းတန်း အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်း (Pyae Ar Man Construction)
အလင်းတန်း အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်း ကို သာကေတမြို့နယ်၊ (၁၁) ရပ်ကွက် ၊ နဝရတ်လမ်းမကြီး ပေါ် တွင် Pyae Ar Man Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားသည့် (၄)ခန်းတွဲ ၊ (၆) ထပ် (R.C.C အဆောက်အဦး) ဖြစ်ပါသည်။...
Thatdar Street Mini Condo (Hua One Construction)
Thatdar Street Mini Condo ကို အမှတ် (၄၆၃)၊ (၄) ရပ်ကွက်၊ သဒ္ဒါလမ်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း တွင် Hua One Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Foundation Pile Foundation Super Structure Reinforced Concrete Frame with Concrete Slab, Readymixed concrete Room Area A1;A2 Type (506.4SqFt)2bed rooms B1;B2 Type (411.6SqFt) 1 bed room Penthouse P1（ 470 sq-ft），P2 ( 470 sq-ft） Electric အခန်းတစ်ခန်းလျှင်...
Bagan Street Mini Condo (Hua One Construction)
Bagan Street Mini Condo ကို အမှတ် (၆၇၅)၊ (၅) ရပ်ကွက်၊ ပုဂံလမ်း တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်း တွင် Hua One Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ထားပါသည်။ Foundation Pile Foundation Super Structure Reinforced Concrete Frame with Concrete Slab, Readymixed concrete Room Area A Type (918 SqFt) Single Bedroom 1, B Type (918 SqFt) Single Bedroom 1, Penthouse P1（ 470 sq-ft），P2 ( 470 sq-ft） Electric အခန်းတစ်ခန်းလျှင်...
Kant Kaw Residence
Kant Kaw Residence ကို No-(110), Mahar Bawga Street, Ward (8), Mayangone TSP, Yangon တွင် Best Guiding Star Co.,Ltd. မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက်ထားပါသည်။ Pile ဖောင်ဒေးရှင်း နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသော သံချောင်း Grade အဆင့် ၂၅ ရှိသော စက်ဖျော် ကွန်ကရစ်သား ၈ထပ်ခွဲ RC အဆောက်အအုံ ရေညှိ နှင့် မှိုမစွဲကပ်နိုင်သော အရောင်ပျက်ပြယ်မှုကို ၆...
Pinlon Village Residences (Universal Construction)
Pinlon Village Residences ကို အမှတ် ၃/၁၊ ရှုခင်းသာလမ်းသွယ်၊ (၂၇) ရပ်ကွက်၊မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် Universal Construction Co.,Ltd မှတည်ဆောက်ထားပါသည်။ မြောက်ဒဂုံ ပင်လုံအိမ်ယာ၊ ပင်လုံဆေးရုံ၊ City Mart၊ ပင်လုံနှင်းဆီကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း တို့နှင့် အနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ Project...
International Language and Business Centre A landmark of style, sophistication and sensibility in the city, Polo Club (Asia) Residence isa34 storey luxury development in Yangon’s Tamwe Township. Yangon’s tallest condominium in Tamwe Township at 34 storeys high Choice of premium 1, 2,3or4bedroom apartments Fully fitted with luxury materials and appliances Built by World’s largest main contractor, China State Construction Engineering Corporation Ltd Project managed by Singapore’s largest design and management firm, Surbana International group Designed and engineered by one of Singapore’s largest architectural firm. Approximately 428,000 sqm in...
202 Baho Street Apartment (iGreen Construction)
202 Baho Street Apartment ကို အမှတ် (၂၀၂)၊ ဗဟိုလမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် တွင် iGreen Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက် ထားပါသည်။ Facilities 25 ft x 49 ft wide, built on2plots of land Elevator.4parking space office hotels, Particularly suitable for use. Total - 12384 sqft (48 'x 43' x6floor)
45 Yadanartheinkha Apartment (iGreen Construction)
45 Yadanartheinkha Apartment ကို အမှတ် (၄၅)၊ ရတနာသိင်္ခလမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် တွင် iGreen Construction Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူတည်ဆောက် ထားပါသည်။ Facilities Junction Square အနီး ၇ ထပ် တိုက် လုံးချင်း 25' x 50' ဂရမ်မြေ Total - 7728 sqft (23' x 48' x7floor) ဓာတ်လှေကားပါသည်။ အထပ်တိုင်း အိပ်ခန်းဖွဲ့ ပြီး ကိုရီးယားပါကေး ခင်းပြီး။
Nang Htike Shwe Sin Condo (Taunggyi)
တောင်ကြီးမြို့၏ အမြင့်ဆုံး နှင့် ပထမဦးဆုံးသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ (၁၆) ထပ်ပါရှိသော နန်းထိုက်ရွှေစင် ကွန်ဒိုဖြစ်ပါသည်။ တောင်ကြီးမြို့၏ တောင်ကြီးမြို့မဈေးမှ မြင်တွေ့ရသော နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီကွန်ဒို တွင် အခန်းပေါင်း (၄၈) ခန်း၊ Penthouses (၂)...